Faahfaahin qoto dheer oo ku saabsan Cootionate Testosterone Cypionate | AASraw
/blog/Gallery/Faahfaahin qoto dheer ee Cypionate Testosterone
Posted on 11 / 19 / 2018 by Dr. Patrick Young ku qoray Gallery.
Dunida oo ah steroids waxay noqotey mid wax-ku-ool ah iyo qof kasta oo u adeegsanaya si uu u gaaro himiladooda jirka, waxaa jira baahi loo qabo in aad wax dheeraad ah ka ogaato Testosterone Cypionate. Waxaan ka wada hadli doonaa faahfaahin badan oo ku saabsan steroidskaan oo ka bilaabma qiyaasta tijaabada, sida loo isku duro Testosterone, sida loola macaamilo tijaabinta xaddi badan ee testosterone, baaritaanada baaritaanka Cypionate ee testosterone Cipionate iyo kuwa kale. Dhammaan wixii aad qabatay waa fadhiisanaysaa inta aan ku galno aduunka ee Testosterone Cypionate.
Ka fikirida goobta ugu fiican soo iibso tijaabada Cypionate Testosteronee? AASraw.com waa doorasho aad u fiican. Waxaan nahay shirkad fadhigeedu yahay Shiinaha oo ku takhasusay soo saarida, suuq-geynta, iyo qaybinta dhexdhexaadinta daawooyinka firfircoon iyo alaabooyinka ay ka mid yihiin Testosterone Cypionate.
Marka waa maxay cypionate testosterone?
Hormoonkaas waa steroid anabolic kaasoo ahaa kii ugu horreeyay ee lagu soo bandhigo suuqa. Dhinaca kale, Testosterone Cypionate waa unug isku tijaabiya oo si tartiib tartiib ah u shaqeynaya, dherer dherer ah iyo saliid ku salaysan. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurka "hypogonadism" kaas oo ah yaraanta Testosterone ee jirka oo sababa dhibaatooyinka kala duwan ee ragga.
Inaad noqoto daroogo dhakhtar qoray, waxaad ku siin kartaa naftaada raaxada gurigaaga ka dib marka uu dhakhtarku kuu sheego sida loo sameeyo. Nasiib wanaag waa is-farsamo, taasina waxay fududeyneysaa isticmaalka. Waxaa sidoo kale laga helaa qaabkeeda guud.
Hormoonkaas waxaa markii ugu horeysay lagu soo saarey 1935, kadib laba sano ka dib markii la sii daayay suuqa maandooriyaha. Markii ugu horraysay, waxaa laga helaa qaabka pellets iyo kaddibna wuxuu ahaa qaabka loo yaqaan 'ester' kaas oo ah cirbad durugsan sida Testosterone Cypionate.
Methyltestosterone, mid ka mid ah steroids ugu horeysay ee la soo saaro ayaa la sii daayay 1935. Nasiib darro, waxaa lala xiriiriyay hepatotoxicity, taas oo ay ugu wacan tahay, waxa ay noqotay mid aan la joojin. Qalabka tijaabada ah ee testosterone testosterone Cypionate waxaa lagu soo bandhigay suuqa dhexdiisa bartamaha 1950s ee shirkad la yiraahdo Upjohn. Asal ahaan waxaa lagu iibiyay magaca Gawaarida-Tijaabada ah ee lagu magacaabo "Depo-Testosterone" waana mid caan ah oo magac leh.
Upjohn ayaa ku lug laheyd soo saarista Kaydinta-Tijaabinta muddo ka badan konton sano laga soo bilaabo markii la bilaabay. Testosterone Cypionate ayaa doorbidayaa tijaabinta tijaabada oo ay sameeyaan jimicsi iyo jilayaal badan. Labaduba way isku mid yihiin, lakiin noloshooda nuskood way ka duwan yihiin.
Testosterone Cypionate wuxuu ka mid ahaa steroids anabolic kaas oo helay ogolaansho in loo isticmaalo daroogada caafimaadka ee 1970s. Waxaa markaa lagu qeexay FDA-da si loogu isticmaalo kaliya daaweynta beddelidda testosterone. Sanado badan, isticmaalkeeda ayaa la xakameynayey maadaama aysan ku habooneyn isticmaalka caruurta iyo haweenka. Cypionate testosterone ayaa loo gudbiyay sida ilmo uurjiifin ilmo dhalmo ah marka lagu qaato qadada toddobaad ee 200mg.
Maxay tahay cideer loo yaqaan 'testosterone cypionate'?
Cypionate testosterone wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo loo isticmaalo nolosheena. Waa kuwan codsiyada.
Dunida jirdhiska, qof walbaa waa inuu ku dadaalaa inuu noqdo kan ugu fiican. Haddii aad tahay qof culus ama cayaaraha, waxaad fahmi doontaa in mararka qaar tartanku noqon karo mid aad u adag. Marka laga reebo is-qanacsanaanta ku timid guuleysiga, la siiyo abaalmarin ama hubinta booska koox xirfadeysan waa tan ugu badan ee loo baahan yahay. Helitaanka waxqabadka noocaas ah ee noloshaada waxay qaadan kartaa toban sanadood ama ka badan iyadoo ku xiran jidhkaaga. Laakiin warka wanaagsani waa daroogada waxtarka leh ee waxtarka leh sida Testosterone Cypionate waxay kugula wareegi kartaa hadafyada jirdhiska.
Waa maxay sababta daawadani ay u tahay mid farxad leh? Waxay sameeyaan murqaha weyn isla markaana isla markiiba waxay kaa dhigayaan inaad si deg deg ah uga soo kabtaan iskudhaf adag adigoo hoos u dhigaya qiyaasta dhaawaca murqaha oo dhaca inta lagu jiro kalfadhiyada. Faa'iidada tan la mid ah ayaa ah in ciyaartoyda ay si adag u baran karaan oo ay si joogta ah u joogsan karaan.
Testosterone Cypionate wuxuu ka caawiyaa sidii loo ilaalin lahaa tayada murqaha iyo xoogga. Waxay kaloo ilaalisaa lafaha iyo cufnaanta. Waxyaabo kale oo weyn ayaa ah inaad marwalba aad udoonayso kulanno tababar ah maaddaama daawadani ay hagaajin doonto oo aad kobcin doonto tababarkaaga.
Testosterone Cypionate waxay kor u qaadaa baruurta iyada oo loo marayo waxqabadka dheef-shiid kiimikaadka. Steroofanku wuxuu awood u leeyahay inuu sidaan sameeyo iyada oo loo marayo habka loo yaqaan 'androgen' si sahlan sidaas darteed wuxuu keenayaa burburka baruurta iyo ka hortagga abuuritaanka unugyada cusub ee baruurta.
Waxa kale oo ay kor u qaadaysaa waxtarnimada nafaqada ee jirka. Waxay kobcinaysaa murqaha si aad u badan cuntooyinka aad isticmaashid waa la wada baabbi'iyey oo loo isticmaalay in lagu horumariyo murqaha badan halkii lagu kaydin lahaa dufan ahaan.
Testosterone Cypionate waxaa loo isticmaalaa daaweynta beddelka ah ee orrogen. Xilligan, waxaa ansixiyay FDA si loogu daaweeyo hypogonadotropic iyo hypogonadism (ama la helo ama la soo dhasho). Xaaladdan waa xanuunka ay raggu aysan awoodin inay keenaan hormoon galmo oo ku filan. Waa maxay farqiga u dhexeeya labada?
Hypogonadotropic hypogonadism- Waxay dhacdaa marka qaybo ka mid ah maskaxda (pituitary gland ama hypothalamus) oo la xidhiidha xiniinyaha marka ay soo saaraan testosterone dhaawac soo gaadhay.
Waa maxay budada nandrolone loo isticmaalo faa'iidooyinka / nandrolone?
Asaasiga asaasiga ah - Waxay dhacdaa marka xiniinyadu aanay awoodin inay keenaan testosterone ku filan.
Markii nin la xanuunsado wuxuu sidan doonaa; jilicsanaan hoose, kicin la'aan (dhibaatooyin helitaanka iyo ilaalinta korriin), diirada oo liidato iyo isbeddello niyadda. Waxay sidoo kale horseedi kartaa dhiig-yaraanta, lumista murqaha iyo timaha jidhka, ginecomastia (horumarinta naaska) iyo koror yaraanta labada xiniinyaha iyo guska. Si kastaba ha noqotee, nabadgelyadiisa ku jirta daweynta cudurka dhimirka ee xilliga dambe ee ragga ayaa weli aan la xaqiijin.
Waxaa intaa dheer, waxaa loo adeegsadaa in lagu daweeyo lafaha, hormoonada bedelida hormoonada ragga, kuwa oligospermia (oo ay ku jirto tirooyin yar oo shahwad ah), daahirsanaanta labka ah, xanuunka naasaha, iyo kansarka naasaha.
Sidee buu u shaqeeyaa tijaabooyinka testosterone?
Testosterone Cypionate waa mid ka mid ah xajmiga asrogan ee ku lug leh koritaanka xubnaha galmada ee lab ah. Waxa kale oo ay ku caawineysaa ilaalinta sifooyinka jinsiga labaad. Waxaa ka mid ah qaybinta dufanka, isbedelka musqusha jirka, dhererka codka maqalka, xoojinta murqaha, iyo korriin qanjirka 'prostate' iyo kobcin.
Daroogadaasi waxay leedahay hanti isku mid ah sida Testosterone, laakiin faa'iidada waxay tahay in uu leeyahay sicir barar iyo dheeri ah. Saacadaha 24 ee maamulkeeda, waxay kordhisaa heerka testosterone ilaa iyo 400%. Heerarka asaasiga ah ayaa laga yaabaa inay sarreeyaan sedex ilaa shan maalmood ka dib maamulka. Marka uu jiro dawada intramuscular ee daroogada, waxay keeni kartaa bararka degaanka iyo isbeddellada libido iyo niyadda.
Testosterone Cypionate wuxuu u shaqeeyaa laba siyaabood oo kala duwan. Marka ugu horeysa waa iyada oo loo marayo isbedelka estradiol ka dib waxqabadka qaar ka mid ah qaboojiyeyaasha estrogen. Waxa kale oo uu ka shaqeeyaa firfircoonida qufaca iyo quudinta.
Waa anabolic esterified sidaas darteed waa mid aad u fajiciso dufanka. Testosterone iyo esterers waa in la mariyaa iyada oo loo marayo cirbadeyn tan iyo markii ay si dhaqso ah u dhaqmeen beerka marka la bixiyay hadal ahaan.
Marka uu jiro dawada xididka daroogada, mugga qaybinta waa kudhowaad 1 L / kg.
Marka nuugista la qaato, daroogadu waxay gasho wareegga dhiigga si loo farsameeyo. Marka wax laga bedelo, 40% waxay ku xidhan tahay glasmaal globulin halka 2% ay ka tagto unbound ama waxay ku xiran tahay borotiinka kale oo ay ku jiraan albumin.
Daawadani si ay u bilawdo shaqo, waxay u baahan tahay in lagu shaqeeyo enzymes. Shaqada xayawaanku waa inay jebiso curaarta u dhexaysa Testosterone iyo qaybta ester ee ka mid ah maadi-dhiska. Testosterone Cypionate waxay leedahay waqti dheeri ah oo ka shaqeyneysa sababtoo ah cabbirka weyn ee dhererkiisa. Marka ay kala go'do, testosterone waxaa loo jajabiyaa xanaanada 17. Waxaa loo maraa laba, oo ka duwan jidadka. Dihydrototestosterone iyo estradiol ayaa ah kuwa ugu muhiimsan ee metabolitiyada firfircoon. Testosterone waxaa loo jebiyey DHT-da mareenka urojarka, beerka, iyo maqaarka. Dihydrototestosterone ayaa sii jajabiyey hoosna iyo isrostanediol.
90% ee qiyaasta testosterone oo la siiyay daawada intramuscularly waxaa lagu tirtiraa kaadida qaabka glucuronic, testosterone's conjugates conjugates iyo metabolitigeeda. Qiyaasta 6% ee testosterone haray ayaa la tirtiraa iyadoo saxaradu caadi ahaan ku jirto foomka aan la xannibin.
The testosterone Cypionate nus-nolosha waa mid ka mid ah ugu dheer tan iyo markii ay ku saabsan tahay sideed maalmood.
Waxyaabaha muhiimka u ah cidhionate testosterone
Testosterone Cypionate waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo calaamadaha hypogonadism ee ragga. Xaaladdan waxaa keena awood la'aanta jirka ee soo saarista hormoonka galmada ee ku filan.
Testosterone Cypionate waxaa lagu heli karaa qaab xal lagu mudo. Waa in lagu daboolaa muruqyada, iyo waxa ugu haboon ee ku saabsan waa inaad adigu naftaada ku sameyso raaxada gurigaaga ka dib markaad ka hadashid sida loo sameeyo dhakhtarkaaga.
Qalitaanka tijaabada Cypionate waxaa la bixiyaa labadaba daroogada guud iyo daroogada magaca. Magaca calaamadda waa Wareeg-testosterone.
Saameyntii cidhionate testosterone ee jirka dhismaha
Qof kasta oo isticmaala Testosterone Cypionate wuxuu caddayn karaa natiijooyinka cajiibka ah ee uu siinayo jirka. Awooddeeda ayaa ka dhigtay in loo tixgeliyo sidii lafdhabarta sare ee suuqa. Intaa waxaa dheer, waxay bixisaa natiijooyin degdeg ah oo cajiib ah.
Marka aad isticmaashay laba iyo tobankii toddobaad, waxaad yeelan doontaa;
Khatarta fatahaada oo kordhay. Waxay ku xiran tahay xakameynta estrogen.
Waxay hagaajineysaa muruqyada si dhakhso ah iyagoo kor u qaadaya hawsha unugga galbeedka.
Iyada oo loo marayo xooritaanka nitrogen, waxay ku siinaysaa faa'iido aad u weyn.
Testosterone Cypionate sidoo kale waxay kordhisaa xooggaaga.
Sidoo kale, testosterone waxay ka hortagtaa saameynta hormoonnada kale ee keeni karta murqaha luminta marxaladda goynta.
Saameynta daawada cypionate testosterone
Sida la yaab leh, daawadani ma keenayso lumis. Inta aad ka xanuunsan karto saamaynta daawada Costeria Testosterone Cypionate, warka wanaagsani waa in ay yihiin kuwo la maamuli karo.
Saameynaha ugu caansan waa;
Acne- Isticmaalka Testosterone Cypionate waxay sababi kartaa finan. Waxay noqon kartaa dhibaato, laakiin waad jeclaan doontaa xaqiiqda ah in daaweynta wax ku ool ah ay diyaar yihiin. Daawooyinka jirka la mariyo sida glycolic acid, benzoyl peroxide, iyo salicylic acid waa kuwa ugu haboon daaweynta qafiifka fudud ilaa dhexdhexaad. Waa inaad sidoo kale ilaalisaa nadaafadda iyo ficilada wanaagsan ee jirka si aad u hesho maqaarka cad.
Kobaca timo-Daawadani waxay keeni kartaa koritaanka timaha meelaha ugu lama filaan ah. Haddii aad ku xanuunsato jirkaaga ama timaha wajiga, waxaa jira siyaabo aad u yareyn kartid. Marka ugu horeysa waa adigoo xiiraya adigoo isticmaalaya xargaha shidaalka ama sakiin. Haddii xoqitaankani uu inta badan ku siiyo sigaarcabka gubashada, waxaa laga yaabaa inaad ka fikirto inaad iibsato kareem dabacsan.
Waxaad sidoo kale xadhig ama kabuubi kartaa timaha laga bilaabo rootiga. Waxyaabtu waa hab kale oo dhakhso ah oo looga saari karo timaha laga bilaabo xididka. Isticmaal kiimikooyin adag oo loo yaqaana sida bakteeriyadu waxay kaa caawin kartaa wax badan, laakiin haddii aad leedahay maqaarka xasaasiga ah, waa inaad marka hore tijaabisaa meel yar. Siyaabaha kale ee looga hortago timaha xad-dhaafka ah waa iyada oo loo marayo isticmaalka daawada, ka-qaadista laser, iyo elektarisigga.
Barar iyo xanuun ku dhaca goobta cirbadaha - Ma aha inaad dhibaato ka haysato sababtoo ah waxaad ku xanuunsatey xanuun ama barar goobta goobta duritaanka. Haddii aad horay u dhacday tallaal, waxaad horey u sheegi kartaa in xanuunku caadi yahay haddii uu sii jiro maalmo yar. Si loo yareeyo tan, hubi inaad u guurto meesha la isku duro. Haddii aad weli xayirto, aagga ayaa waxyeeleyn kara wax badan. Si xanuunka loo xakameyn karo, waxaa laga yaabaa inaad ka fikirto inaad qaadato xanuunka xanuunka si looga caawiyo xanuunka iyo bararka. Hab kale oo wanaagsan oo loola macaamili karo waa iyada oo la baddalayo xirmo kulul oo ka baxsan aagga tallaalka la siiyey. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad raadsataa dareenka takhtarka marka aad aragto in xanuunka ama bararku aysan ku jirin saacadaha 48.
Ginecomastia (ballaarinta naaska) -Waxaad ogaan kartaa in naaskaaga aad u weyn tahay ka dib markaad isticmaasho daawadan. Taasi waa inaysan walwal gelin; talooyinka soo socda ayaa soo geli doona. Marka hore waxa la isticmaalayaa shukulo adag. Waa doorasho aad u fiican maaddaama ay fududahay jeebka iyo yareynta muuqaalka naaska si wax ku ool ah. Waxa kale oo aad tijaabin kartaa jimicsiyada jinjiyawajiyadeed sida tababarka isbeddelka xooggan (HIIT), riixid, cadaadiska jilbaha, iyo safka xajmiga. Si loo yareeyo muuqaalka naaska bararsan, waa inaad ku dadaashaa inaad dhisato murqaha. Waxay sameyn doontaa naasaha weyn ee muuqda. Iyo sababtoo ah dufku wuxuu kor u qaadaa barar, waa inaad iska ilaalisaa cuntooyinka dufanka leh iyo inaad isticmaasho dufanka caafimaad sida miro, cagaarka caleenta, kalluunka dufanka leh iyo baradhada macaan. Hab kale oo loo xakameyn karo ginecomastia waa in la mariyo qalitaan kaas oo ka saari doona dufanka ku jira naaska.
Qalabka joogtada ah ee joogtada ah - Dhex-dhexaadintu waa wax caadi ah, laakiin kuwa aan la rabin waxay noqon karaan waxoogaa xun. Waa inaanay kaa joojin inaad isticmaasho Testosterone Cypionate. Waxaad mar walba wax ka qaban kartaa qalab aan caadi ahayn oo soo jiidata. Hadda adigu way isweydiineysaa sida loo sameeyo. Marka ay dhacdo, uma baahnid inaad dareentid in dunidu ay burburinayso; fadhiiso, si tartiib ah u neefso oo u aamuso. Si aad u yareeyso xishoodka soo socda, waxaad dabooli kartaa qalabka loo yaqaan 'laptop', shaadh ama jacket. Looma baahna in la jahwareeriyo, qof walbaba waa la kulmaa, malahan badanaaba cidna ma oga inaad haysato mid. Waxaad sidoo kale ka fekeri kartaa, isku dayi kartaa inaad iskaga mashquuliso, qubeysid qubeyska, inaad qubeysid diirimaad ama jimicsi aad u fiican sida jogging. Si kastaba ha ahaatee waxaa lagula talinayaa in haddii qalabku uu xanuun badan yahay, waa inaad raadsataa dareenka takhtarka.
Dhibaatooyinka joogtada ah ee ka dheer inta caadiga ah - Dhexdhexaadku wuxuu soconayaa afar saacadood ama ka badan maahan. Testosterone Cypionate wuxuu sababi karaa arrintan, waxaana laga yaabaa inaad tan u adkeysid adiga oo gelinaya barafka aagga. Tani, korriin adag ayaa tagi karta daqiiqad. Dhaqtarka ayaa sidoo kale ku siin kara kiniin ama irbado si aad wax uga qabato.
Madax xanuun - Madax xanuun ayaa laga yaabaa in la keeno isticmaalka Cypionate Testosterone. Way adkaan kartaa inaad shaqeyso, wadato ama wadahadal la yeelatid madaxaaga xanaaqa laakiin waxaad sameyn kartaa wax ka badan intii aad sariirta ku sugi laheyd oo aad iska sugi kartid. Waxaad isku dayi kartaa inaad qaadatid xanuunka miisaanka ku soo gala sida aspirin, naproxen, ibuprofen, iyo acetaminophen. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa talooyinka soo socda si aad ula qabsato xanuunka. Indhahaaga xir oo naso qaado. Waxaad sidoo kale dhigi kartaa masaajidkaaga iyo qoortaada. Waxa kale oo lagugula talin karaa in aad nasatid oo aad isku daydid inaad dhigato dhar diiran ama daboolka kuleylka ku yaal salka hoose ee maskaxda iyo qoorta qoorta. Raadso daryeel caafimaad haddii xanuunku sii socdo.
Nuujiyo niyadda-Mararka qaarkood waxaad dareemeysaa inaad rabto inaad maalin maalmaha ka mid ah ku qaadato maalmaha kale, waxaad dareemi kartaa farxad. Waa wax caadi ah ilaa iyo inta uusan saameyn ku yeelan hawlahaaga maalmeed. Dhanka kale, isbeddelada niyadda ba'an waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa inaan wax sax aheyn. Testosterone waxay sababi kartaa tan tan iyo haddii uu sameeyo, wax ka qabashadiisu waa xadhig. Haddii aad si joogta ah u jimicsatid, waxaad ogaan doontaa in aad sameysid kumbuyuutarkaaga isla markiiba. Cunista cunto caafimaad leh ma aha oo kaliya muhiimadda caafimaadka jidhkaaga, laakiin sidoo kale waxay faa'iido u leedahay hagaajinta niyaddaada. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad barato nasasho adiga oo ka qayb qaadanaya dhaqannada caloosha sida meditating iyo yoga. La tasho dhakhtarka haddii aad dareentid in niyadjabkaaga niyadjabku uu noloshaada ka qaadi doono.
Hoos-u-dhac ku dhaca nambarka manida marka daroogada loo isticmaalo qadar sare - Haddii aad dhibaato ka haysato helitaanka lamaanahaaga uurka sababtoo ah isticmaalka Testosterone Cypionate waxaad qaadan kartaa daaweynta hoormoonka iyo daawooyinka si loo saxo tan. Wax kale oo aanad isticmaali karin hababka tiknoolajiyada taranka (ART). Haddii daaweyntu u muuqato mid aan haboonayn, waxaad kordhin kartaa tirada waqtiyada aad galmo sameysid ama aad galmo yeelatid marka labkaalijiriddu ay dhici karto. Iska ilaalinta jilciyeyaasha ka hortagi kara dhaqdhaqaaqa shahwadu waa hab fiican oo loo maareeyo tan.
Haddii dhammaan waxyeelooyinkaas ay yihiin kuwo sahlan, markaa waxaa la filayaa inay iska tagaan maalmo yar ama dhowr toddobaad. Haddii aysan dhicin, la hadal farmashiistahaaga ama dhakhtarkaaga.
Kuwani waa waxyeelo aad u daran oo loo baahan yahay in si dhab ah loo qaato. Marka aad aragto mid ka mid ah astaamahan, wac dhakhtarkaaga isla markiiba. Weydiiso gargaar degdeg ah marka aad dareentid in calaamadaha ay halis ku yihiin nolosha iyo haddii aad u maleyneyso inay yihiin xaalad degdeg ah. Waa kuwan waxyeelada iyo calaamadaha ay tahay inaad fiiriso;
Wadna xanuunka- Si aad u ogaato inaad ku xanuunsan tahay mid, waxaad dareemi kartaa in aad haysatid kuwan soo socda; raaxo la'aanta jirkaada, neefta yar, iyo xabad xanuun.
Kordhinta qiyaasta qanjirka 'prostate'. Waa calaamad u ah; karti la'aanta inaad ka faaruqiso kaadiheysta, adoo isdifaacaya intaad doonaysid inaad kaadidid, adigoo haysta kaadida daciifka ah ama mid ka mid ah raajada oo dib u bilaaba iyo dhibaatada kaadida. Calaamad kale waa nocturia (dareenka kaadida badan habeenkii) iyo baahi degdeg ah oo joogto ah oo loo baahdo kaadi.
Stroke - Hadal sir ah ayaa calaamadeyn kara, sidoo kale wuxuu dareemayaa daciifnimo dhinaca jirka.
Kansarka qanjirka 'prostate' - Dhakhtarkaagu waa inuu hubiyaa dhibaatooyinka qanjidhka qanjirka 'prostate' ka hor iyo inta lagu jiro mudada daaweynta Testosterone Cypionate gaar ahaan haddii aad tahay lix iyo shan jir ama ka weyn.
Dhibaatooyinka Beerka-Waxaa laga yaabaa in lagu arko iftiinka indhaha ama maqaarka, kaadida madow, lumitaanka cuntada, daal aan caadi ahayn, saxaro madow, oo si fudud u bararaan si caadi ah oo barar ah anqawyada iyo lugaha. Waxa kale oo laga yaabaa in aad la kulanto barar iyo calool xanuun, matag iyo lallabo.
Polycythemia- Tani waa kor u kaca tirada unugga dhiigga cas. Calaamadihiisu waa; hoos u dhaca feejignaanta maskaxeed, daal, xinjir dhiig, madax-dhiigfuranka, jahawareerka, madax-xanuunka iyo dib-u-dhaca wajiga.
Pulmonary Embolism - Tani waa sameynta xinjiro dhiig oo ku jira sanbabada. Calaamadaheeda waa dhiig qufac, qummanaan dhakhso ah, dareemid wareer ama dawakhsan, suuxdin, laab xanuun, ama xanuun kugu dhaco markaad qaadato neefsasho qoto dheer iyo neefsasho gaaban.
Dhiig-xinjirowga xididada dhiigga - Dhiigxinjirowga dhiigga ee lugahaaga qotoma qotoma ayaa calaamad u ah xanuunka iyo bararka lugaha.
Qiyaasta Cypionate testosterone
Qiyaasta tijaabada ah ee loo yaqaan 'testypone cypionate' ayaa saameyn ku yeelan kara arrimo qaarkood. Kuwani waa;
Xaaladda la daweynayo.
Sidee ayuu u daran yahay xaaladda?
Cudurrada kale ee aad ku jiri karto
Sidee jirku uga jawaab celinayaa qiyaasta hore
Noocyada daroogada iyo xoogga
Waxaa jira laba nooc oo ah "Testosterone Cypionate" marka ugu horeysa ee foomka guud. Waa xalka laysku duro oo leh xoogga 100mg / ml iyo 200mg / ml.
Midda labaadna waa nooca loo yaqaan 'Depo-testosterone' kaas oo sidoo kale ku jira qaabka loo mudo. Waxaa laga heli karaa 100mg / ml iyo 200mg / ml.
Qaadashada qiyaasta koowaad ee asaasiga ah
Qiyaasta bilawga ah ee caadiga ah-Qiyaasta dhakhtarku qorayo waxay ku xiran tahay baaritaankaaga iyo da'daada. Iyada oo ku saleysan baahidaada dhakhtarka ayaa ogaan kara qiyaasta daawada ugu fiican. Isaga ama iyada ayaa kuu qori kara xaddiga 50-400 mg toddobaad kasta 2-4.
Qiyaaso kordhin - Waxaa laga yaabaa in dhakhtarkaaga uu kugula taliyo inaad kordhiso qiyaasta daaweynta, heerarka dhiigga ee testosterone iyo saameynada daawada.
Qiyaasta ugu badan ee daawadani waa XMUMX mg isku duro murqaha labadii asbuucba mar.
Qiyaasta ilmaha (12-17 sano)
Qiyaasta bilowga ah ee caadiga ah - Dhakhtarkaagu wuxuu kuu sharxi doonaa qiyaasta cunugaaga iyadoo ku xiran ciladkiisa iyo da'da. Wuxuu ku siin doonaa warqad dhakhtar ah sida baahiyahaaga. Guud ahaan, wuxuu kugula talin karaa qiyaas daawo ah 50-400 mg muruqa yar yar laba ilaa afar asbuucba.
Kordhinta qiyaasta - Dhakhtarku wuxuu go'aansan karaa inuu kordhiyo qiyaasta cunugaaga iyadoo ku xiran saameyntooda, jawaabta daaweynta iyo heerarka dhiigga ee testosterone.
Qiyaasta ugu badan ee lagu duro muruqa ilmahaagu waa inay ahaato mg 400 labadii toddobaadba mar.
Qiyaasta ilmaha (0-11 sano)
Daraasado ku saabsan amniga iyo waxtarka daawadan ee carruurta da'doodu ka yar tahay laba iyo toban ayaan weli la qaban.
Qiyaasta daaweynta hypogonadotropic hypogonadism
Qiyaasta dadka waaweyn (18 sano iyo ka badan)
Qiyaasta bilawga ah ee caadiga ah- Qiyaastaada ayaa ku xiran hadba sida lagu ogaado cudurkaaga iyo da'daada. Dhakhtarku wuxuu go'aamin karaa qiyaasta iyadoo ku xiran baahidaada. Qiyaas daawo oo 50-400mg loo rogo muruqa muddo laba ilaa afar toddobaad ah.
Qiyaaso kordhin - Dhakhtarku wuxuu kugula talin karaa kordhinta qiyaasta daaweyneed iyadoo ku xiran saamaynta daawada, jawaabta daaweynta iyo heerarka dhiigga ee testosterone.
Qiyaasta ugu badan ee xinjirta 400 mg ee muruqaaga labadii asbuucba mar.
Qiyaasta bilawga ah ee caadiga ah-Qiyaasta cunugaaga waxay kuxirantahay baaritaanka iyo da'dooda. Dhakhtarka ayaa go'aan ka gaaraya baahida ilmahaaga. Guud ahaan, qiyaasta waa inay noqotaa xinjirmo 50-400 ee muruqa ka dib isbuuc kasta 2-4.
Qiyaasta kordhinta - Qiyaasta ilmahaaga ayaa lagu hagaajin karaa iyada oo la eegayo saameynta ay keento, jawaabtooda daaweynta iyo heerarka dhiigga ee testosterone.
Qiyaasta ugu badan ee lagu mudo muruqa ilmahaaga waa inay noqotaa 400mg labadii usbuucba mar.
Wali lama xaqiijin in daawadani ay tahay mid amaan ah ama waxtar u leh isticmaalka carruurta ka yar labo iyo toban sano.
Haddii aad isticmaasho si aad u dhisto murqaha lagu gaaro waxqabadka cayaaraha qiyaasta daawada 100-200 mg ee todobaadkii waa ku filan. Afar toddobaad kadib, waxaad kordhin kartaa qiyaasta iyadoo ku xiran natiijooyinka aad ka hesho jirkaada ama sida uu jirkaagu uga falceliyo isticmaalka daroogada.
Si joogto ah, cypionate testosterone waxaa loo isticmaalaa si looga hortago saamaynta T-heerarka kale ee steroids ee qofka uu qaadan karo. Marka loo isticmaalo tan, Testosterone Cypionate 200mg-400mg waa qiyaasta.
Wareegga laf-dhabarka testosterone
Haddii aad xiiseyneyso inaad qaadato Tijaabo ah Cypionate Cypionate iyaga oo ujeedadoodu tahay in la daadiyo dufanka iyo muruqyada dhismaha, wareeggaagu waa inuu ahaadaa sidan:
Qalitaanka Cideeriyada Cootionone waa inuu ahaado toddobaad toddobaad ah toddobaadkii 200 illaa toddobaadka laba iyo tobnaad. Waa inaad, si kastaba ha ahaatee, xusuusnow in haddii aad adigu isdifaacayso Testosterone Cypionate oo leh stero-kasta oo kale markaa qiyaasta isbeddelka. Waa maxay sababta?
Steroids kastaa waxay leedahay nolol kala duwan. Waxaad u baahan tahay inaad tan tixgeliso ka hor intaadan go'aansan inaad xirayso steroids. Sidoo kale, waa inaad taxaddarisaa markaad bilaabeyso isbeddel ku yimaada sababtoo ah ma ogid sida jirkaagaagu uga falcelin doono wax ka badan hal stero. Si looga hortago dhibaatooyinka waa inaad hubisaa in aad tijaabiso steroid kasta oo idil marka hore. Waxa kale oo aad iska ilaalin kartaa isla markaana isticmaali kartaa hal steroow waqti.
Daaweynta wareegga dambe
Daaweyntani waa mid muhiim u ah adoo qaadanaya steroids naftooda. Sababtoo ah, ka dib isticmaalka Testosterone Cypionate, awooda jidhkaaga ee soo saarida hoormoonka ayaa hadda la joojiyay. Ka dib marka lagu sameeyo wareegga testosterone, jidhkaaga ayaa laga yaabaa inuu ku dhaco estrogen. Sababtoo ah jidhkaaga ayaa ku tiirsan irbadaha si uu u soo saaro testosterone magaciisa markaa tijaabooyinka ayaa si dhib yar u soo saari kara.
Digniinaha lafdhabarta ee tijaabada
Ka hor intaadan isticmaalin daawadan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa ku dhici kara jidhkaaga. Waxay keeni kartaa hypercalcemia oo ku jirta bukaannada aan nooleyn. Haddii taasi dhacdo, waa inaad joojisaa isticmaalka daroogada markiiba.
Iska ilaali isticmaalka dheeraadka ah ee daawadan qadar sare leh maxaa yeelay waxay keeni kartaa dhibaatooyin nolosha nafta halis geliya sida peliosis hepat, hepatocellular carcinoma, iyo adenomas hepatic.
In kasta oo aan weli la xaqiijin, bukaanka dibatiga ayaa looga digay isticmaalka daroogada sababta oo ah waxay keeni kartaa kansarka prostatic kansarka iyo prostatic hypertrophy.
Testosterone Cypionate waxay sababi kartaa dhacdooyinka dhiig-baxa ee isdaba-geliya kuwaas oo laga yaabo in ay calaamad u tahay neefta daran ee jirka, bararka, iyo xanuunka. Haddii aad ka xanuunsan tahay, jooji isticmaalka daroogada oo kaala macaamilka xaalad habboon.
Dadka ku xad gudbay daroogada, waxay sababi kartaa fal-celin dhimireed oo daran iyo wadne-xanuunka. Tan iyo markii uu keeno Edema, waxay noqon kartaa nolol khatar ku ah dadka qaba jirrooyinka beerka, kalyaha iyo wadnaha. Ginecomastia ayaa sidoo kale laga yaabaa inay horumariso.
Khamriga benzyl ee loo isticmaalo sidii loo ilaalin lahaa waxyeelo halis ah sida xanuunka cirridka. Qadar yar, ma saameyn karto. Sidoo kale, ragga ragga qaba ee dib u dhigtay qaangaadhnimadu waxay la kulmi kartaa in ay dhererkoodu yar yahay. Sababtoo ah waxay saameysaa kobaca lafaha.
Maxaa dhacaya haddii aan ka maqnaado qadar ama xad dhaaf
Baaritaanka Cypionate Cypionate waa daaweyn muddo dheer ah oo sidaas darteed, waxay keeni kartaa saameyn xun haddii aan loo qaadan habka saxda ah.
Haddii aad joojiso isticmaalka dawada si joogto ah ama aadan u qaadan dhammaantiis waxay keeni kartaa daawada aan si sax ah u shaqeynin. Sababta ayaa ah daroogada si sax ah u shaqeyneysa, qadar gaar ah waa inuu jirkaaga ku jiraa mar walba. Haddii aadan qaadan dawadan, waxaa laga yaabaa inaad ku dhacdo calaamadaha testosterone oo hooseeya.
Haddii aad seegto qiyaasta ama aad ku guuldareysato inaad daawada qaadato sida jadwalka, waxaa laga yaabaa inaysan si fiican u shaqeyn ama joojin wadashaqeyn dhamaystiran. Sababtoo ah daroogada si sax ah u shaqeyneysa, qaddar go'an waa inuu jirku ku jiraa had iyo jeer. Waa inaadan qaadin xaddi xad dhaaf ah markaad dalbato inaad beddesho qiyaasta la seegay. Waxay keeni kartaa waxyeelo daran. Waxaa lagugula talinayaa in aad wacdid dhakhtarkaaga oo u sheeg waqtiga ugu dambeeya ee lagaa jaray cypionate testosterone. Isaga / iyadu waxay kaa caawineysaa inaad la timaadid jadwal cusub.
Haddii ay dhacdo inaad qabtid baaritaan dheeraad ah oo tijaabo ah taas oo macnaheedu yahay inaad yeelanayso heerarka khatarta daawadan ee jirkaada. Astaamihiisa waxaa ka mid ah:
Tirada hoos u dhaca shahwada
Waxaa laga yaabaa inaad la kulanto dhirbaaxo joogta oo ka dheer sidii caadiga ahayd
Waxaa laga yaabaa inaad yeelato wakhti go'an
Ginecomastia (ballaarinta xad dhaafka ah ee naaska)
Barar iyo xanuunka meesha laga duray
Haddii aad ka shakisan tahay in aad qaadatay wax badan oo ka mid ah Cypionate Testosterone, la tasho dhakhtarkaaga ama xarunta xakamaynta sunta ah. Haddii calaamadahaagu ay yihiin kuwo daran, u tag qolka gurmadka isla markiiba.
Sidee loo ogaanayaa haddii daroogadu shaqeyneyso - Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ogaato in daawada aad ku jirtid ay shaqeyneyso. Waxaad ogaan doontaa astaamaha testosterone hooseeyo.
Taxaddarrada baaritaanka Cypionate
Si aad uga fogaato dhibaatooyinka kale intaad ku jirto tijaabada baaritaanka, waxaad u baahan tahay inaad la hadasho dhakhtarkaaga si uu kuu sheego haddii aad ku haboon tahay inaad isticmaasho daroogada. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, marwalba waad weydiisan kartaa dhakhtarkaaga si aad u hesho faham fiican oo daawadan. Maxay yihiin waxyaabo ay tahay inaad u sheegto dhakhtarkaaga ka hor inta aanad qaadin Cypionate Testosterone Cypionate?
U sheeg dhaqtarka haddii aad xasaasiyad u leedahay dawadan ama xasaasiyad kasta oo aad ku jiri karto. Muhiimadda tani waa in daroogadu ay ku jiri karto qaybo firfircoon oo aad xasaasiyad u leedahay.
Dhakhtarku waa inuu sidoo kale ogsoonaadaa taariikhdaada caafimaad, tusaale ahaan, haddii aad horeyba uheshay sonkorow, hurdada hurdada, prostate weyn, kansarka (kansarka prostateka, kansarka naasaha ee ragga), cadaadiska dhiigga sareeya, kolestaroolka sare, dhibaatooyinka kelyaha, beerka dhibaatooyinka, istaroogga, wadne xanuunka (sida wadnaha wadnaha, xanuunka laabta iyo wadnaha oo aan shaqeynin) iyo xinjiro dhiig oo ku dhaca sanbabada iyo lugaha.
Haddii aad qabto sonkorow, daawadani waxay hoos u dhigeysaa sonkorta dhiiggaaga. Si aad u heshid nabadgelyo maskaxeed, hubso in aad sonkorta dhiiggaaga si joogto ah u hubiso sida loogu talagalay oo u sheeg dhakhtarka inuu ogaado natiijooyinka. Haddii aad aragto calaamadaha sonkorta dhiiga oo hooseeya sida cagaha ama gacmaha, madax-wareer, aragtida cagaha, gaajo, wadna garaacid, ruxid, ama dhidid dhidid ah isla markiiba u sheeg dhakhtarkaaga. Si arrintan looga hortago, dhakhtarkaagu wuxuu wax ka bedeli karaa cuntadaada, barnaamijka jimicsiga, iyo daawada sonkorowga.
Waxaa intaa sii dheer, Testosterone Cypionate waxay saameyn kartaa kolestaroolkaaga markaa sii kordhinaysa halista xididdada dhiigga (cudurka halbowlaha wadnaha) iyo dhibaatooyinka wadnaha. Waxyaabaha ugu badbaado waa in dhakhtarku uu kormeero heerarka kolesteroolkaaga.
Ku wargeli dhakhtarkaaga haddii aadan awoodin inaad socotid ama aad u noqotid sariirta waqti dheer markaad isticmaaleysid Testosterone Cypionate. Si aad uga hortagto dhibaatooyinka, waa inaad u fiirsataa heerkulka dhiiggaaga kalsiumka si joogto ah. Haddii aad si dhakhso ah u qalantid, waa inaad u sheegtaa dhakhtarkaaga ilkaha ama dhakhtarka wixii ku saabsan dhammaan daawooyinka aad isticmaalayso xilligaas. Waa inay ku jirtaa dhammaan cuntooyinka dhirta, kuwa aan dawo lahayn, iyo daawooyinka dhakhtarku qoro.
Markaad u isticmaasho daroogadaada yar yar, waxa badanaa lagaa qaadayaa taxadar sababtoo ah waxay saameyn kartaa kobaca lafaha oo la joojiyo dhererka qaangaarka ee ilmaha. Inta lagu jiro daaweynta, waa inaad la socotaa koritaanka iyo horumarka lafaha ilmahaaga. Digniinta waa in sidoo kale la qaadaa marka dadka qaangaarka ah ay ku jiraan daaweyntaan sababtoo ah waxay aad ugu nugul yihiin dhibaatooyinkooda sida barar gacmaha iyo lugaha, dhibaatooyinka beerka / prostate ah.
Xanuunka dhicisku waa mid aad u badan, maaddaama daawadani ay saameyn karto uurkaaga, waxaa lagula talinayaa in aad ka fogaato haddii aad filaneyso. Ka fikir inaad isticmaasho qaababka lagu kalsoon yahay ee xakameynta dhalmada sida kiniinada xakameynta dhalmada ama kondhomka si looga fogaado inaad uur yeelatid inta daawadan lagu jiro. Maxaa dhacaya haddii shil ahaan dhaco? U sheeg dhakhtarkaaga isla markiiba.
Wali lama xaqiijin haddii daawadani ay ku dhici karto caanaha naaska. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la ogsoon yahay in ay saameyn karto waxsoosaarka caanaha taas oo keenaysa in ay waxyeelo u tahay ilmo xanaaneeyn. Si looga fogaado waxyeelo, ha isticmaalin daawadan markaad naas nuujineyso. Waa inaad sidoo kale raadsataa talada takhtarka kahor naas nuujinta.
Sidee loo isku duraa Testosterone Cypionate
Isku-tallinta isdifaaciddu waxay u egtahay shaqo adag, laakiin marka aad fahamto sida loo sameeyo, waxaad u mahadcelinaysaa xaqiiqda ah inaysan qiime lahayn walwal. Hadda adigu waad isweydiin kartaa; xagee ka bilaabaa? Is-degso, gaabiso oo neefso. Waa kuwan waxa la sameeyo:
Hubi inaad haysatid qiyaas sax ah Cervionate-Checkter si aad uhesho qiyaasta saxda ah ee daawadan kahor inta aadan bixin cirbadeynta.
Qaado irbad nadiif ah, cirbad ku haboon iyo sirinjiye - Si aad u qaadato Cypionate Testosterone Cypionate; waxaa lagula talinayaa in aad isticmaasho irbad nadiif ah oo aan hore loo isticmaalin. Had iyo jeer isticmaal mid ka mid ah nadiif ah oo la daboolay wakhti kasta oo aad rabto in lagaa mudo. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato in Testosterone Cypionate uu yahay mid aad u hooseeya oo muuqaal ah, sidaas darteed, waa inaad isticmaashaa irbad dhaadheer si aad u soo qaadato daroogada. Cirbadaha cirridku way xanuun badan yihiin si looga hortago tan; waxaad ku bedeli kartaa mid yar oo khafiif ah marba wakhtigeeda si loo siiyo cirbadeynta. Fadlan ogow in marka irbadda ama sirinjadu dhibato, ma ahan mid nadiif ah oo aadan helin wax kale oo aan ahayn tuurista.
Gacmahaaga si fiican u nadiifi oo gashado gacmo gashi ah - Ku nadiifinta gacmo nadiif ah ayaa kaa hortageysa infakshanka, iyo haddii gacmo-gashigaagu uu taabto shay kasta ama dusha aan la nadiifin, waa inaad beddeshaa.
Soo qaado qiyaasta saxda ah - Si aad tan u samayso hawo ku soo celi dhalada si aad kor ugu qaaddo cadaadiska hawada gudaha. Faa'iidada tani waa in aad si dhaqso ah u soo qaadato daawadani inkastoo ay qaro weyn tahay. Kadib waxaad dhalada ku shubi kartaa dhalada korkeeda iyo helitaanka saxda ah ee daawada aad u baahan tahay.
Hadda u wareeg cirbad yar-Ma jirto baahi loo qabo in aad adigu is barato xannuun aad u daran marka uu jiro wax aad sameyn kartid si aad u sameyso habka qanjirada. Si loo hubiyo in daawada aysan ku dhicin sidaad sidan u sameyn lahayd, xajinta irbadda irbadda, soo qaad hawada qaarna ka saar. Isticmaal gacan adag oo ku beddel mid ka mid khafiif ah. Sidoo kale waa inay ahaato mid nadiif ah oo aan la isticmaalin.
Sifaynta saliingaha-Marka ay timaado cirbadaha, xumbada hawada ee jirka ku dhacaya waxay keeni kartaa dhibaato daran. Si loo hubiyo in tani aysan dhicin, waxaad u baahan tahay inaad uuraysatid. Waxa aad qabatid waxay qabtaa sirinjo tilmaamaysa cirbadda aan duubnayn. Si taxadar leh u fiiri goobooyin kasta oo hawo ah oo laga yaabo inay ku jirto saliingaha. Dusha ka saar dhinaca dhinaca si aad ugu gudubto dhinaca sare. Marka aad hubiso in daroogadu ay xumbo bilaash tahay, xooga saar hawada. Si aad u ogaatid inay dhammaantood soo baxayaan, sug in dhibic ka mid ah xalka si uu uga soo baxo caarada sharootiga. Ka digtoonow markaad tan sameyso si aad uga fogaato dabaqa dhulka.
Diyaarso goobta cirbadaha - Cirbadeynta waa in la siiyaa qaybta sare ee gudaha ama qaybta sare ee bowdada. Kuwani ma aha meelaha keliya ee cirbadda lagu duri karo, laakiin waa kuwa ugu badan. Isticmaal aalkolo nadiif ah si aad u tirtirto aagga. Tani waxay sameyneysaa, bakteeriyadu ma lahan meel maqaarkaaga ah, waxayna sidoo kale ka hortagtaa infekshannada. Si looga fogaado dhaawaca xididdada dhiigga ama dareemayaasha, dooro goobta cirbadaha ee ku taal qaybta sare ee ka baxsan dhalmada.
Isku-xakamee sida loo tijaabiyo tijaabada baaritaanka? Saliingaha ku hay daroogada 90 ee ka sarreysa aagga lagu muday jeermiska. Si deg deg ah u riix oo wax yar ka soo saar. Haddii ay dhacdo in aad dareento dhiig ku jira siriinjaha macnaheedu yahay in aad dhaawacday xididka. U hesho meel kale oo ku habboon oo daroogada ku mudo si joogto ah. Dareemida raaxo yar ama xanuun ayaa ah mid caadi ah laakiin haddii xanuunka uu aad u xoog badan yahay islamarkaana la xiriir dhakhtar isla markiiba.
Ka taxadar meesha aagga mudista ka dib markaad cirbadda ka soo baxday. Si sidan loo sameeyo si wax ku ool ah, u hubi meesha laga soo galo ee irbadda oo ku rid kubad suuf ah. Ka saar dhamaan cirbadaha loo isticmaalo iyo siriinjyada si habboon. Haddii aad dareento barar aan caadi ahayn, guduudasho ama raaxo la'aan, la xiriir dhakhtarka markiiba.
Sida loo kaydinta Cypionate testosterone
Testosterone Cypionate waa in lagu kaydiyaa 20 illaa 25 degree Celsius. Sidoo kale iska fogee nalka, qoyaanka, iyo kuleylka. Daawooyinka oo dhan ka fogee carruurta si ay uga hortagaan sumowga. Marka daroogadu dhacdo, iska tuur si habboon. Iska ilaali daawadan ama hoos ku shubi tuubo sababtoo ah waxaa laga yaabaa in uu sumoobo.
Cunnooyinka si aad u sameysid Testosterone Cypionate by steroids budada
Ku riyaaqsan sameynta Cypionate Testosterone? Cuntooyinkaas ayaa ku siin doona waxaad u baahan tahay.
1. Baadhitaanka Cypionate 5gram ee 20ml ee 250mg / ml
5gm ee cyp test
1ml ee Benzyl Alcohol oo la mid ah 5% BA
25 ml saliidda sisinta
3cc, 5 / 10 cirbadaha cc
Qiyaasaha 18 / 20
Gawaarida Gawaarida ah
Isku qasinta Vial
Qalabka Whatman ee neefta
Waxa la qabanayo:
Weel culus ee 5 ee budada
Ku rid budada ku rid foornada
Ku dar BA si aad u shubtid
Saliidda ku rid foornada iyo kuleylka. Waxay ka caawisaa nadiifinta. Cunto ka badan inta aad u baahan tahay si aad u hesho wax ku filan digsiga.
Ku shub saliinka guska oo keydso 2ml dambe. Si tartiib ah u rux.
Waxaad diirin kartaa isku darka haddii aad jeceshahay. Waxaad ku dhajin kartaa surwaalka qaboojiyaha ama indhaha kariyaha.
Qaado cirbadda 18 ama 20 oo ku rid foornada nadiifka ah. Sidoo kale, ku xir xargaha Whatman sterile.
Si loo cadaadiyo cadaadiska, cirbad kale ku rid foornada naaska.
Isticmaal sirinjiye ayaa soo saara xalka oo ku dhex maraa filter Whatman.
Qaado 2ml oo saliid ah oo ku jirta sirinjeeriye kale oo uxususho Whatman.
2. Baadhitaanka Cypionate 10 Gram 40 ml ee 250mg / ml
5 ml saliidda sisinta
2ml ee Alcohol Benzyl = 5% BA
10 grams ee cyp test
3cc iyo 5 / 10cc cirbadaha
8 ml ee 5% BA
Milixiter 7 saliid canab ah
15 Grams ee Cabbirta Cypionate Test
185 ml saliid canab ah
45mls ee Benzyl Benzoate
5ml ee Alcohol Benzyl
5ml ee saliidda shinnida
45 ml ee Benzyl Benzoate
25 ml saliid shinni ah
2ml ee Alcohol Benzyl
75 ML ee 25g Testosterone Cyp Powder
Sidee loo dhamaystiri karaa Testosterone Cypionate ka soo budooyinka ceeriin ceeriin ceeriin ah
Waxaa laga yaabaa inaad ka fikirto inaad iibsato steroids budo cayriin ah oo samee naftaada Testosterone. Waxaanu ku bari doonaa sida loo sameeyo baarista testosterone Cypionate budada.
Mililitir kasta oo 100 mg per ml ayaa ku jira:
100 mg of Testosterone Cubionate Cypionate
Millimarinta 1 ee benzyl benzoate
Mg-ka 736 ee saliidda shinnida
Mg-ka 45 ee khamriga Benzyl
Qiyaasta dijital ah oo cabbiri kara 0.01g
Qalabka sirinjiraha ah ee Steringe 22um
Vial glass dhalada ah oo ka kooban cabbir kasta
Sargalaha cabbir kasta
Tallaabada ugu horreysa waa in la miisaamo Cootionate Testosterone Cypionate iyo ku rid galaas galaaska. Ku dar Benzyl Benzoate iyo Benzyl Alcohol.
Dareemayaashu waxay bilaabaan inay kala diraan budada si toos ah, laakiin haddii aad rabto inaad xawaareyso geeddi-socodka, waxaad isticmaali kartaa biyaha qubeyska. Ku rid weelka biyo yar oo ah digsi ama meel kale oo ku haboon. Ha isticmaalin biyo aad u kulul sababtoo ah alaabooyinka qaar ayaa oksidise ah. Saliidda daroogada aad rabto inaad isticmaasho waa inay ahaato mid heerkulkeedu isku mid yahay sida xalka si aad u go'aansato inaad xaraashid xalka markaas saliid xayawaanka waa in la wareejiyaa. Sababta arrintan loo samaynaayo waa in la hubiyo in dhammaan budada loo kala qaybiyo dareerayaasha. Iska hubi in aanay jirin wax budo ah oo muuqda oo ka dambeeya xalka.
Qaado saliida saliidda ee suufka ah ee loo yaqaan 'soy sooma'. Si habboon u qallal oo hubi in aysan jirin hoosto hoostoon ah oo haddii ay dhacdo, qaado xalka biyaha qubeyska oo aad u hesho nidaamka shaandhaynta.
Tallaabada xigta waxay isticmaalaysaa siriinjo si loo soo saaro xalka aad isticmaali karto si aad uga faaidaysato. Waxaad isticmaali kartaa syringe ballaaran mar ama dhowr sirinjin yar ka dib. Xakamee xajmiga siringe ee 0.22 iyo cirbadda cagaaran ku riix qaybta hoose oo ku rid syringe.
Isticmaal suufka alkolada si aad u tirtirto qaybta sare ee shubanka naaska. Gali cirbadda cagaaran oo ku rid meesha cirbadda lagu xiro sharooto siriinjaha galaya.
Mararka qaarkood waxaad ogaan kartaa in shaandhada laga yaabo inay xakameyso ama geeddi-socodku uu yareeyo. Xaaladdan, waxaad sameyn kartaa bedelka shaandhada mid kale si aad u badbaadiso waqti. Nooca iyo xaddiga budada steroid ee aad isticmaashid waa waxa go'aaminaya xaddiga waqtiga habka uu qaadanayo.
Badeecada ayaa diyaar u ah inay isticmaasho kaddib markaad sheyga ku shubto weelka nadiifka ah.
Ma ka maqashay dib-u-eegista Cidesionate Testosterone? Tilmaamahan ayaa ah kan ugu fiican iyo haddii aadan weli sameynin maankaaga, waxaad tixgelin kartaa akhrinta dib u eegista soo socota.
Yuan ayaa yiri "Tan iyo markii aan bilaabay daawooyinkan sannadkii hore, waxaan dareemay guulo fara badan oo ka dhacay jimka. Maqaygaygu waa muuqan yahay, tani waxay iga dhigtay inaan jimicsigu aad u jeclaado ".
Li wuxuu sheegay inuusan marnaba taagneynin tagista jimicsiga. Wuxuu awoodaa in uu tago tababarka maalin kasta adigoon ahayn daal. Maalin kasta shaqada ka dib wuxuu tagaa jimicsiga wuxuuna shaqeeyaa shaqeyn waqti kasta oo uu dareemo sida.
Chen wuxuu isku duraa 200 labadii usbuucba hal jeer markii uu dhakhtarku qoray. Waxa uu yiri "Ilaa iyo hadda waxaan ku socdaa wadada saxda ah ee aan ku heleyno murqo iyo miisaan culus. Thanks to daroogada, hadda waxaan dareemayaa sida nin ".
Qiimeeynta Cypionate Testosterone
Hadda waxaad ogtahay waxa badeecadani kuu qaban karo adiga, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ogaatid qiimaha Cootionate Testosterone. Haddaba intee ayaa le'eg qiimaha testosterone Cypionate? Waxay ku xiran tahay tirada aad rabto iyo qiyaastaada.
Waxay kaloo ku kala duwanaan kartaa dukaamada kala duwan iyadoo ku xiran meesha.
Sida loo iibsado Costerion testosterone online
Waxaad ka iibsan kartaa Testosterone Cypionate adoo gujinaya mashiinka. Waxay la timaadaa faa'iidooyin badan oo ay ka mid yihiin sahlanaanta. Halkan waa waxa la sameeyo;
Raadi bogga AASraw.com
Raadi erayga "cideerone testosterone".
Buuxi foomka codsiga ee iibsiga oo soo gudbiya. Waxay ku jiri doontaa tirada iyo goobtaada.
Waxa laga yaabaa in lagaaga baahdo inaad buuxiso su'aal caafimaad oo gaaban si loo go'aamiyo u-qalmitaankaaga inaad iibsato alaabta. Si dhakhso ah ayaad u buuxin kartaa una soo gudbin kartaa. Takhasuskayaga ayaa markaa dib u eegi doona waxaana laga yaabaa inuu aqbalo amarkaaga.
Marka amarkaaga la aqbalo, waxaad hadda bixin kartaa lacagta iyadoo la adeegsanayo hababka ugu habboon, oo mar marka ay dhammaato, alaabta ayaa si degdeg ah loo diraa. Goobtaadu waxay go'aamin doontaa qadarka waqtiga ay alaabtu ku socoto.
Run ahaantii, haddii aad rabto inaad isbeddel ku sameyso safarkaaga jirka, tani waa heshiiska dhabta ah. Weligaa waad ka qoomamoonaysaa inaad doorato jidkan maaddaama faa'idooyinka aan la tirin karin. Hadda waxaad joojin kartaa raadinta steroid kale sababtoo ah waxaad horay u heshay mid ka mid ah awooda ay awood u lahayn suuqa.
Maxay tahay in aad cuni kartid wax kasta oo aad jeceshahay adoon cabsida haysashada kaydinta dufanka. Jirkaaga ayaa isbedelaya, waxaadna ku guuleysan doontaa qiyaasta jirka ee aad ku fiican tahay. Waxaad sidoo kale u baahan tahay tababbar yar si aad u hesho jirka aad mar walba jeclayd.
Looma baahna inaad ka welwesho soo kabashadaada ka dib markaad u adkeysid. Sababtoo ah badeecadani waxay kordhineysaa qoyaanka nitrogen iyo synthesis protein. Sidoo kale, waxaad heli doontaa dhiirigelin dheeraad ah, haddii ay tani dhibaato kaa haysato, hadda waxaad yeelan kartaa dhammaan maskaxda si aad u bilowdo tababarkaaga mar kale.
Testosterone Cypionate ma ballanqaadayso inay kugu dhejiso qurux badan, laakiin waxay kaa caawin doontaa inaad sameyso hadafyada jirka ee kaa caawin doona inaad ku guulaysato bilado iyo koobab.
Shaqadayada, waxaannu shaqaaleynaa dad aan caadi ahayn oo ka yimid goobo kala duwan. Khibrada xirfadeed, tababarka aadka u fiican, iyo waxqabadka cajiibka ah ee ay haystaan ​​waa waxa ka dambeeya guusheena. Sida hay'ad, waxaan rajeyneynaa inaan kobcinno horumarkooda iyada oo loo marayo tababbarro badan. Waxaan sidoo kale siinaa qalab ku filan oo isgaarsiin si kor loogu qaado niyad-jabka, ballanqaadka, iyo waxtarka.
Waxaan bixinnaa tayada tayo sare leh qiimo aad u qiimo badan. Alaabtayadu waa kuwo saafi ah, waxaadna hubsan kartaa in waxtarkooda aan laga adkaan. Waxaa macquul ah xaqiiqda ah in aan isticmaalno qalabka ugu fiican dhammaan habka wax soo saarka. Inta lagu jiro wax soo saarka, waxaan u hoggaansameynaa dhamaan sharciyada iyo baaritaanka tayada si loo hubiyo in aan bixino alaabo ku qanciya baahida macaamiisheena.
Waxaan samaynaa dadaal kasta si aan u nadiifinno bey'adeena iyadoo hubineysa in hawlaha aanu qabanno aysan saameyn xun ku yeelan doonin. Ugu dambeyn, macaamiishayadu waa laf-dhabarkeena. Adeegga macaamiishu waa mid aad uwanaagsan oo dhageysta macmiil kasta. Waxyaabaha kale ee noo kala soocaya adeeg bixiyeyaasha kale waa in aan jawaab celin macaamiil ah si dhab ah u qaadano. Noqo cabasho ama talooyin; codkaaga marwalba waa soo dhaweynayaa.
Nagu soo qaado maanta annaga oo soo mari adeegyadayada fiican. Ma aha oo kaliya in aad alaabtaada si dhakhso ah u heli doonto, laakiin waxay kuu qaban doonaan shaqada laguu qabtay.
Mabaadi'da iyo Tababbarrada Endocrinology iyo Metabolism, oo ay sameeyeen bogga Kenneth L. Becker 1189-1893
Testosterone: Waxqabadka, Baabi'inta, Beddelidda, waxaa sameeyey Ed E. Nieschlag, HM Behre 272-317
Williams Bookbook of Endocrinology, Shlomo Melmed, Kenneth S. Polonsky, P. Reed Larsen, Henry M. Kronenberg, bogga 758-766
7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa 2018
7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa Sunifiram Waxyaabaha 10 waxaad u baahantahay inaad ogaatid kahor intaadan qaadan DMAA